HomeSuuqa kala iibsigaLiverpool oo sii wada baacsiga loogu jiro xiddiga kooxda Sporting Lisbon
November 27, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Maanta 0
Kooxaha waa weyn ee Premier League Liverpool, Arsenal iyo Man Utd ayaa lagu soo waramayaa inay dhamaantood isha la raacayaan xiddiga kooxda Sporting Lisbon Nuno Mendes.
18 jirkaan daafaca badan ayaa ka mid noqday kooxda koowaad ee Sporting ka dib markii uu xirmay xilli ciyaareedkii hore, isagoo ciyaaray sagaalkii kulan ee ugu danbeysay xilli ciyaareedkaan.
Mendes ayaa booskiisa ceshtay bilowgii ololahan cusub, isagoo ciyaaray afar kulan tartamada oo dhan wuxuuna shabaqa soo taabtay markii ugu horreysay kulankiisii ​​ugu horreeyay ee waa weyn ka hor ciyaaraha caalamiga.
Calciomercato ayaa sheegtay in soo bixitaanka daafaca bidix uu soo jiitay indhaha kooxo badan oo waa weyn oo Yurub ah oo ay ku jiraan kooxaha Premier League ee Arsenal, Man Utd iyo Liverpool.
Red Devils iyo Mersyeside Reds labadoodaba waxay xoojinayaan dooqa daafaca bidix inta lagu guda jiro xagaaga, halka Gunners ay si fiican ugu qabto xioso weyn, sedexdaba wali waxaa lasoo warinayaa inay udhaqaaqayaan Nuno Mendes
AC Milan ayaa sidoo kale xiiseyneysa daafaca tayada leh, in kasta oo dhibka ay la kulmee noqon karto qiimahiisa iyadoo Sporting aysan dooneynin inay tixgeliso wax ka hooseeya qandaraaskiisa lagu burburin karo € 45m (£ 40.9m).
Mendes, oo heshiiskiisa kooxda reer Portugal uusan dhamaanayn ilaa 2025, wuxuu inta badan kasoo muuqday garabka bidix ee kooxda Sporting, si kastaba ha ahaatee, wuxuu kaloo awoodaa inuu ka ciyaaro daafaca dhexe.